Arsenal oo dhaq-dhaqaaq wanaagsan ka sameyneysa suuqa kala iibsiga iyadoo dalab ka gudbisay Aouar, kuna soo biirtay doonista xiddig Barcelona u ciyaara – Gool FM
(London) 08 Luulyo 2021. Kooxda Arsenal ayaa ugu dambeyn xiisihii ay u muujineysay xiddiga kooxda Lyon ee Houssem Aouar u rogtay ka howl galidda soo xero gelintiisa iyadoo dalab rasmi ah u gudbisay naadiga Faransiiska ka dhisan si ay kaga soo qaadato laacibka ka ciyaara khadka dhexe.
Wargeyska Faransiiska kasoo baxa ee Le Sport10 ayaa sheegay inay Gunners dalab qiimihiisu u dhexeeyo 20 milyan illaa 25 milyan oo euro u gudbisay Lyon si ay kagala soo wareegto Aouar oo muddo bartilmaameed u ahaa.
Arsenal oo haatan sugeysa jawaabta dhiggeeda ayaa sidoo kale loollan adag kala kulmeysa kooxda Atletico Madrid oo xiiseyneysa laacibka reer France, waxaana sidaas darteed, ay ka fikireysaa u dhaqaaqista xiddig booskiisa ka ciyaara si ay uga gaashaamato haddii ay saxiixiisa ku guuldarreysato.
Kooxda ka dhisan Waqooyiga magaalada London ayaa kusoo biirtay kooxaha xiiseynaya laacibka ku fashilmay Barcelona ee Miralem Pjanic kaasoo ay Barca u sheegtay inuu raadsado koox uu ku biiro isla markaasna xagaagan laga iibinayo Camp Nou.
Si kastaba ha ahaatee, Arsenal ayaa sidoo kale hardan u galeysa saxiixa 31-sano jirka khadka dhexe ka ciyaara kaasoo sidoo kale bartilmaameed u ah kooxaha London kala dhisan ee Chelsea iyo Tottenham oo ay wararku sheegayaan inay qaab amaah ah ku doonayaan laacibka reer Bosnia and Herzegovina.
Kaddib Manchester United, naadi kale oo ka dhisan Ingiriiska oo kusoo biirtay loollanka loogu jiro saxiixa Camavinga